Atelier35 - I-Airbnb
Isitudiyo esinemigangatho emibini sibekwe kwigadi engasemva enoxolo yekhaya lababuki zindwendwe. Ukuzimela kunye nokuxhotyiswa ngokupheleleyo, i-2km ukuya kwisikhululo seenqwelomoya, i-1km ukuya esibhedlele, i-4 kms ukuya kwi-Square. kunye ne-6km ukuya kwiYunivesithi yaseMassey kunye namaZiko eSayensi. Indawo yokupaka ngaphandle kwesitalato. Ukuthatha simahla kwaye ubuyele kwisikhululo seenqwelomoya.
Iyakwazi ukuhlalisa ukuya kuthi ga kubantu aba-4, ibhedi eyi-Queen eyi-1 + ibhedi enye e-1 phezulu, ibhedi e-1 ye-ottoman kwigumbi lokuhlala. Ngokulungiselelwa kwangaphambili ibhedi eyongezelelweyo (1) inokubonelelwa.
Ifakwe kwigadi evuthiweyo enelanga yemithi emikhulu ene-tuis, iifantails, amehlo e-wax kunye nezinye iintaka ezininzi. Iindwendwe zamkelekile ukusebenzisa iterrace kunye negadi kunye nebarbecue.
4.92 · Izimvo eziyi-170
Le ndawo yindawo ephantsi engundoqo eqala ukukhula ngokutsha, kwaye ipropathi yethu yindawo 'eyindawo evulekileyo' yemithi kule ndawo. Kukho iivenkile ezikum-500m ukusuka esangweni - iibhaka-bhaka, ukutya okuthengiswayo, ivenkile yekofu, ikhemisti, imveliso yobisi, indawo yokwenza iinwele, iThala leeNcwadi yesebe kwaye ngaphakathi kwenye i-500m kukho i-Bunnings, kunye ne-bottle store.
Iindwendwe kufuneka zibe neMy Vaccine Pass esebenzayo